Tontolo_iainana · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Janoary, 2008
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Janoary, 2008
Frantsa 30 Janoary 2008
Blog d'hiver [“Blog des quatre saisons” no anarany hafa] izay soratan'ny namana Malagasy iray dia maneso ireo seminera sy kôlôky momba ny fampandrosoana maharitra izay “tsy misy fitsaharana” mihitsy : Ces incessants séminaires et colloques sur le développement durable, organisés par des administrations ou des collectivités, et souvent financés par...
Costa Rica: Filaharana fiarovana tontolo iainana
Filaharana fahadimy manerantany i Costa amin'ny fiarovana na fitsimbinana ny tontolo iainana manerantany nefa voalohany kosa raha any amin'ny Kaontinanta Amerikana, hoy ny tondro fijerena ny fiarovana ny tontolo iainana navoakan'ny Oniversite Yale sy Columbia. Nireharehan'i mpamaham-bolongana ao amin'ny Out of Costa Rica [es] io valin'ny fanadihadiana nijery ny politikan'ny firenena...
Borondi 28 Janoary 2008
Mozambika : Raharaha fanapahana ala tsy ara-dalàna hafa
Mozambika 24 Janoary 2008
Carlos Serra no mitatitra ity raharaha nahasaronana fanapahana ala tsy ara-dalàna izay nokasaina haondrana ivelan'i Mozambika ity. Tamin'ity indray mitoraka ity dia fiara vaventy fito nitondra hazo folo taonina isany no saron'ny Polisy Mozambikana tany amin'ny faritry Meconta. Ny fanapahana ala tsy ara-dalàna amin'ity firenena ity dia resaka tsy ankijanona...
Manao antso avo ny nahazo ny loka Nobel momba ny tontolo iainana
Kenyà 24 Janoary 2008
Hita ao amin’ny Pambazuka: fa manao antso avo hanoherana ny famoizana aina sy fananana any Kenya ny Prof. Wangari Maathai, izay efa nahazo ny loka nobel momba ny tontolo iainana. “ Efa nolazainy kosa fa efa nisy tantarany ny fisamatsamahana, nandamoka tamin’ny fifampiraharahana tamin’ny mpamporisika sy ny mpanakorontana. Nolazain’ny Prof...
Afrika Atsimo : Vehivavy mpamboly “bio”
Afrika Atsimo 18 Janoary 2008
Manapariaka lahatsary i Nubian Cheetah izay ahitana ireo vehivavy mpamboly “bio” any Afrika Atsimo: The women in the the Fezeka community in Gugulethu, South Africa are growing organic foods and selling them at market prices.” “Ireo vehivavy anivon'ny fiaraha-monina Fezeka any Gugulethu, any Afrika Atsimo dia mamboly “bio” [manaja ny...